Template:Infobox MP Hannah Serwaa Tetteh a ɔwoo no wɔ Kotonimaa bosome da a ɛtɔ so aduasa-baako wɔ afe apem aha-nkron aduosia-nson (31 Kotonimaa, 1967) yɛ Ghananii a ɔyɛ mmranimfoɔ ne ɔmanyɔnii. Ɔsom Ghanaman sɛ Ɔmansuafoɔ a ɔhwɛ Dwadie ne Nnwuma so firi afe Mpem mmienu ne nkron de kɔ sii afe Mpem mmienu ne du-mmiɛnsa (2009-2013). Na ɔka amansuafoɔ mpaninfoɔ a Ghana manpanyin apaa wɔn sɛ Kabinet saa mmrɛ no mu. Ɔsan dii dwuma sɛ Ɔmansuafoɔ a ɔhwɛ Amanɔne Nsɛm so firi afe Mpem mmienu ne du-mmiɛnsa kɔsii afe Mpem mmienu ne du-nson (2013-2017). Na ɔsan yɛ mmrahyɛbadwamnii ma Awutu-Senya Atɔeɛ mpɛsuaso.
N'abrabɔ ahyaseɛ ne adesua
Ɔwoo Hannah Tetteh wɔ kuro a wɔfrɛ no Szeged wɔ ɔman Hungary mu. N'agya yɛ Ghananii na ne nna nso firi ɔman Hungary mu. Ɔnyaa ne ntoasoɔ sukuu nteteɛ wɔ Wesley Girls High School wɔ Oguaa (Cape Coast) a ɛwɔ Mfinfini Mantɛm, Ghanaman mu ɛfiri afe Apem aha-nkron aduoson nnwɔtwe (1978) de kɔsi afe Apem aha-nkron aduowɔtwe-num (1985).
Ɛwɔ afe Apem aha-nkron aduowɔtwe-nsia (1986) ne afe Apem aha-nkron aduowɔtwe-nkron (1989) ntɛm no, ɔkɔ suaa mmara wɔ Ghana Suopɔn mu (University of Ghana) maa no nyaa Abɔdin krataa wɔ Mmara mu (Bachelor of Law, LL.B). Afei nso ɔsan kɔɔ Ghana sukuu a ɔma mmara nteteɛ (Ghana School of Law) ɛna ɔbɛyɛɛ Mmaranimnii wɔ afe Apem aha-nkron aduokron mmienu.
Ɛfiri afe Apem aha-nkron aduokron mmienu de kɔ si afe Apem aha-nkron aduokron mmiɛnsa mu no, Hannah Tetteh yɛɛ ne "National Service" sɛ mmra dwumayɛnii wɔ Mmaa Mmaranimfoɔ Kubaatan a wato ne din wɔ brɔfo kasa mu sɛ "International Federation of Women Lawyers (FIDA)". Ɛno akyi no ɔkɔɔso kɔyɛɛ adwuma wɔ 'Ansa-Asare and Company, of Hencil Chambers' a ɛyɛ mmara dwumayɛkuo a ɛwɔ Nkran (Accra). Ɔdii mfeɛ mmienu wɔ hɔ no, ɔde ne ho kɔbɔɔ wɔn a wɔhwɛ nipa faahodie ne wɔn akwanya a ɔwɔ wɔ wiase yi mu a potɔ kasa mu no ɛde 'Commission on Human Rights and Administrative Justice' sɛ mmara dwumayɛnii. Akyire no ɔsan de ne ho kɔ bɔɔ dwumakuo a wɔto no din sɛ 'Ghana Agro Food Company (GAFCO)' sɛ mmara fotufoɔ. GAFCO yɛ adwumakuo bi a wɔyɛ nnuane bi te sɛ esam, nkokɔ ne mmoa nnuane, mpataa ne tuna a ɛwɔ konko mu.
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanna_Tetteh&oldid=19679"
This page was last edited on 1 June 2019, at 16:18.